Baankiin Awaash namoota garee Teelegiraamaa irratti miseensota affeeraniif badhaasa qopheesseraa? – ኢትዮጵያ ቼክ
Baankiin Awaash namoota garee Teelegiraamaa irratti miseensota affeeraniif badhaasa qopheesseraa?
Tibbana toorawwan Teelegiraamaa maqaa Baankii Awaashiin banamanfi hordoftoota kumaatamaan lakka’aman qaban tokko tokko baankichi namoota marsaa hawaasaa Teelegiraamaa “baankichaa” irratti miseensota affeeran (‘add’ godhan) badhaasaa akka jiru barreessaa jiru.
Akka fakkeenyaatti gareen Teelegiraamaa hordoftoota kuma 100 ol qabu baankichi sagantaa badhaasaa kanaaf birrii miliyoona tokko ramaduusaa hima.
Haaluma kanaan namni namoota 50 hanga 100 ta’an gara garee Teelegiraamaa maqaa Baankii Awaashiin baname kanatti affeered qarshii 1,000 akka badhaafamus hima.
Chaanaaliiwwan Teelegiraamaa kunneen dhugummaan kan Baankii Awaash ta’uufi dhiisuu isaanii akkasumas baankichi sagantaa badhaasaa kana qopheessusaa mirkaneeffachuuf Itoophiyaa Cheek Baankii Awaashitti gulaalaa olaanaa Kutaa Komunikeeshinii kan ta’an Obbo Tashoomaa Waaqjiraa haasofsiisee jira.
Isaanis baankichi ammatti sagantaa badhaasaa ‘namoota Teelegiraamitti affeeraa badhaafamaa’ jedhu kan hin qopheessine ta’uu Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Dabalataan toorawwan Teelegiraamaa maqaa baankichaatiin burjaajii uumaa jiran kunneen kan Baankii Awaash akka hintaanes dubbatan.
Chaanaaliin Teelegiraamaa Baankii Awaash inni sirriin https://t.me/awash_bank_official akka ta’es himaniiru.
Dabalataan Obbo Tashoomaan burjaajessitootni maqaa Baankii Awaashiin fuulawwan Feesbuukii sobaa banuun “hojii isin qacarsiisna” jechuun maallaqa guuraafi burjaajessaa akka jiranis Itoophiyaa Cheekitti himaniiru.
Hawaasnis toorawwan marsaalee hawaasaa sobaa maqaa baankichaan namoota burjaajessan irraa akka of eegu Obbo Tashoomaan gaafataniiru.